तिहार विशेषः पशुपक्षीलाई एक दिनको पूजा र माला ! – दैनिक नेपाल न्युज
तिहार विशेषः पशुपक्षीलाई एक दिनको पूजा र माला !
काठमाडौँ, ८ कात्तिकः नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक (तिहार) शुरु भएको छ । तिहारका बेला काग, कुकुर, गोरु र गाईको धुमधामले पूजा गरी माला लगाएर मीठामीठा परिकार खुवाउने चलन छ । गाईगोरु नहुनेहरु जसको घरमा छ, उसैकोमा गएर पूजा गर्नेको लर्काे नै लाग्छ । अघिपछि वास्ता नगर्ने सडकमा खोजीखोजी कुकुरलाई माला लगाउन तम्सन्छन् । माया गरेजस्तो गरी सेल्फी हानेर हतारहतार सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् ।
यहाँ पालिएका कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरी बलियो बनाएर उसको पुरानै ठाउँमा छाड्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । असहाय पशुको संरक्षणका लागि डा गोविन्द टण्डनले २७ वर्षअघि पशुपक्षीप्रति निर्दयीता रोकावट समाज नेपाल स्थापना गर्नुभएको थियो । पृथ्वीमा सबै प्राणीले बाँच्न पाउने अधिकार छ । सबैले सबैलाई प्रेम गरौँ मानवलाई पनि माया गर्नुपर्छ र असहाय पशुलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उक्त संस्थाको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । (रासस)
महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालयः कविकुञ्ज प्राप्तिमै एक वर्ष